Manidy ny sisintany i Korea Avaratra: Coronavirus
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manidy ny sisintany i Korea Avaratra: Coronavirus
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Janoary 25, 2020
Fa maninona no nikatona ny sisintany i Korea Avaratra?
- Nanidy ny sisintaniny i Korea Avaratra mba hisorohana ny fihanaky ny Coronavirus, avy any Wuhan any Shina - saingy nanomboka niparitaka tany ivelany.
Tamin'ny faha-20 Janoary 2020, voamarina fa nihanaka tany Korea Atsimo io viriosy io, ary voalaza fa niparitaka tamin'ny firenen-kafa toa an'i Etazonia sy Japon.
► Efa nanao an'io ve i Korea Avaratra?
Tamin'ny taona 2003 (SARS) sy 2015 (Ebola), nanidy ny sisintany ho an'ny fizahantany i Korea Avaratra.
► Rahoviana indray i Korea Avaratra no hanokatra ny sisintany?
Mampalahelo fa tsy fantatsika hoe rahoviana no hisokatra amin'ny fizahan-tany i Korea Avaratra.
Miankina betsaka amin'ny fihanaky ny viriosy sy ny faharetany.
Afaka mamaky bebe kokoa amin'ny pejin-tranonkalanao ianao Eto izay hohazoninay vaovao sy ny fanavaozana farany indrindra, ary koa ny valin'ny fanontanianao.
Mayday, Mayday nataon'ny Senatera sy solontena rehetra...
Emirates sy Gulf Air: Tsy misy fifaninanana intsony?
Ny complex indostrialy mitsingevana lehibe indrindra eran-tany